Ethiopian Airline oo ka fakaraysa in ay bilowdo duulimaadyo u dhaxeeya Puntland iyo Addis Ababa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandEthiopian Airline oo ka fakaraysa in ay bilowdo duulimaadyo u dhaxeeya Puntland iyo Addis Ababa
June 13, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Diyaarada Ethiopian Airline ayaa ka fakaraysa in ay bilowdo duulimaadyo u dhaxeeya Puntland iyo Addis Ababa.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magaalada Addis Ababa kula kulmay masuuliyiinta sare ee Ethiopian Airline, sida lagu sheegay war-saxaafadeed Arbacadii kasoo baxay madaxtooyada.
“Kulanka ayaa looga wada-hadlay sidii shirkadda duulimaadyada caalamiga ah ee Itoobiya Puntland uga hirgelin-lahayd duulimaadyo joogto ah, kuwaas oo xoojinaya, qaybna ka noqonaya xidhiidhka ganacsi ee ka dhexeeya Puntland iyo dalka Itoobiya iyo Iskuxirka Puntland iyo caalamka kale.” Ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
“Sidoo kale Madaxweyne Deni ayaa xusay in Puntland ay leedahay garoomo diyaaradeed oo caalami ah, kuwaasi oo buuxinaya shuruudaha diyaaraddaha nooc walba oo ay yihiin, wuxuu cadeeyey inay Puntland diyaar u tahay waxkasta oo lagu suurta gelinayo hirgelinta duulimaadyada shirkadda Ethiopian Airline.”
Masuuliyiinta Ethiopian Airline ayaa soo dhaweeyay in ay bilaabaan duulimaadyo isku xiraya Puntland iyo Ethiopia, waxayna magacaabeen guddi farsamo oo dhawaan imaan doona Garoowe si ay u ugu kuur galaan habka shaqo ee garoonka diyaaradaha, war-saxaafadeedka ayaa intaas ku daray.
July 15, 2019 Ethiopian Airlines oo duulimaadyo ka bilowday Puntland markii ugu horeysay
December 22, 2019 Air Djibouti oo bilowday duulimaadkeedii ugu horeeyay ee u dhaxeeya Garoowe iyo Jabuuti
March 11, 2019 lix qof oo Soomaali ah oo la xaqiijiyay in ay kamid ahaayeen dadkii ku dhintay burburkii diyaaradda Ethiopian Airlines
Midowga Yurub oo ogolaaday 42 milyan oo Yuro ah oo lagu maalgelinayo kaabayaasha Soomaaliya
Wasiirkii hore ee amniga Puntland oo uga digay Faroole in uu keligiis ku hadlo magaca siyaasiyiinta gobolka Nugaal
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirkii hore ee amniga Puntland ayaa sheegay in Faroole uusan keligiis ku hadli karin siyaasadda gobolka Nugaal. “Nugaal hal siyaasi ma leh, Cabdiraxmaan keliya siyaasi maahan, siyaasiyiin badan bay leedahay, waan ka digeynaa [...]